Redmi Note 8T waxay lahaan doontaa 18W lacag bixin degdeg ah | Androidsis
Toddobaadkii hore ayaan helnay markii ugu horeysay xogta ku saabsan Redmi Note 8T. Ilaa hada waxba lagama oga telefoonkan cusub ee sumadda Shiinaha, taas oo u muuqata inay wax yar ka dib suuqa imanayso. Qalab ay xogtu mar kale lagu sifeeyay markan, kaas oo naga caawinaya in aan si qumman u fikirno waxa aan ka filan karno.
Xaaladdan faahfaahinta ayaa la muujiyaa ku saabsan batteriga iyo culeyska ay Redmi Note 8T taageeri doonto. Marka inyar oo yar ayaan fikrad fiican kahaysanaa waxa ay shirkadu nooga tagi doonto qalabkan. Waxa qarsoon weli waa goorta si rasmi ah loo sii deyn doono.
Batariga Redmi Note 8T wuxuu lahaan lahaa awood dhan 4.000 Mah, sida la ogsoon yahay. Sidaa darteed waa inay na siisaa ismaamul wanaagsan markasta. Hadda waxaa la xaqiijiyay inay taageero u yeelan doonto lacag-bixinta degdegga ah, gaar ahaan loogu talagalay 18W lacag deg deg ah. Muuqaal muhiim ah sidoo kale.
Moodelkan nooca Shiinaha ah waxaa lagu bilaabayaa bartamaha. Dhawaan waxaa suurtagal ahayd in la arko in processor-keedu uu noqon doono Snapdragon 665, oo ah nooc ka mid ah qaybtan suuqa. Sidii caadada u ahayd kiiskan, kamaradaha ayaa noqon doona mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ku jira.
Tan iyo markii Redmi Note 8T waxay la imaan doontaa afar kamaradood oo gadaal ah, oo isku dhafan 48MP + 8MP + 2MP + 2MP. Dhammaantood waxay ku shaqeeyaan sirdoon farsamo, sidii caadiga ahayd. Kameradda hore hal 13 MP dareemayaal ayaa loo isticmaali doonaa kiiskan, ugu yaraan marka loo eego xogaha.
Weli garan mayno goorta aan kari karno sug tan Redmi Note 8T inay timaado suuqa. Faahfaahin yar yar ayaa ka soo baxaysa, taas oo kaa dhigaysa inaad qiyaasto inay dhowaan timaaddo. Laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax xaqiijin ah oo ka imanaya shirkadda, markaa waa inaan sugnaa waa inaan aragnaa goorta qalabkan si rasmi ah loo soo bandhigayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi Note 8T waxay yeelan doontaa 18W lacag deg deg ah